कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो । तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previousनेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी
Nextराजधानीमा अचाक्ली धुलोधुँवा : थलिँदै बालबालिका